ဆီးရောဂါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အလွယ်တကူ လက်တွေ့ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်းလေး – Suehninsi
ဆီးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး_ လွယ်ကူလက်တွေ့ပျောက်ကင်းသည့်_သဘာဝဆေးနည်း ဒါကတော့ ပြောင်းချည်မျှင်(သို့)ပြောင်းဆံမြိတ် (Corn Silk)လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြောင်းဆံမြိတ် မရင့်မနုကို ဖြတ်တောက်၍ ခြောက်သွေ့အေးမျှသန့်ရှင်းတဲ့နေရာ၌ အခြောက်ခံထားပါ။ *ပြောင်းဆံမြိတ်
အခြောက်ကို ရေ( ၃)ခွက် (၁)တင်ကျန်အောင် အိုးသန့်သန့်ထဲ၌ ထည့်ပြုတ်ပါ။ ကျန်ရှိတဲ့ ပြောင်းဆံမြိတ်အရည်ကို လူသားတို့ သောက်သုံးပေးပါက… Bladder infections:ဆီးအိမ် ဆီးရောဂါအမျိုးမျိုး.. Inflammation of the urinary system:ဆီးပူ
ဆီးနီ ဆီးအောင့် ရောဂါဝေဒနာများ… Kidney stones:ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်ခြင်း.. Congestive heart failure:နှလုံးကြပ်ခြင်း နှလုံးရပ်ခြင်း မောခြင်း…. Diabetes:ဆီးချိုရောဂါ.. High blood pressure:သွေးပေါင်တက်ခြင်း…
Fatigue:အလုပ်များ၍ မောပန်း နွမ်းနယ်ခြင်းများ… High cholesterol levels:ပိုနေတဲ့ အဆီတွေကိုလည်း လျော့ချပေးသည့်အပြင် များစွာသော ရောဂါများကိုလည်း ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါသည်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…မေတ္တာဖြင့်…
ဆီးရောဂါနဲ့ပတျသကျပွီး_ လှယျကူလကျတှပြေ့ောကျကငျးသညျ့_သဘာဝဆေးနညျး ဒါကတော့ ပွောငျးခညျြမြှငျ(သို့)ပွောငျးဆံမွိတျ (Corn Silk)လို့ချေါပါတယျ။ပွောငျးဆံမွိတျ မရငျ့မနုကို ဖွတျတောကျ၍ ခွောကျသှအေ့ေးမြှသနျ့ရှငျးတဲ့နရော၌ အခွောကျခံထားပါ။ *ပွောငျးဆံမွိတျ
အခွောကျကို ရေ( ၃)ခှကျ (၁)တငျကနျြအောငျ အိုးသနျ့သနျ့ထဲ၌ ထညျ့ပွုတျပါ။ ကနျြရှိတဲ့ ပွောငျးဆံမွိတျအရညျကို လူသားတို့ သောကျသုံးပေးပါက… Bladder infections:ဆီးအိမျ ဆီးရောဂါအမြိုးမြိုး.. Inflammation of the urinary system:ဆီးပူ
ဆီးနီ ဆီးအောငျ့ ရောဂါဝဒေနာမြား… Kidney stones:ကြောကျကပျ ကြောကျတညျခွငျး.. Congestive heart failure:နှလုံးကွပျခွငျး နှလုံးရပျခွငျး မောခွငျး…. Diabetes:ဆီးခြိုရောဂါ.. High blood pressure:သှေးပေါငျတကျခွငျး…
Fatigue:အလုပျမြား၍ မောပနျး နှမျးနယျခွငျးမြား… High cholesterol levels:ပိုနတေဲ့ အဆီတှကေိုလညျး လြော့ခပြေးသညျ့အပွငျ မြားစှာသော ရောဂါမြားကိုလညျး ပြောကျကငျးသကျသာစပေါသညျ။ကြေးဇူးတငျပါတယျ…မတ်ေတာဖွငျ့…
Source : ဘဝခါးခါး
အနုပညာအလုပ်တွေကို အသက်(၆၀)မှာ စွန့်လွှတ်ပြီး သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်
မိခင်ဖြစ်သူကို ကိုဗစ်ကာလမှာ အခက်အခဲမဖြစ်အောင် ပိုက်ဆံတွေနဲ့ သွားရောက် ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ကေညီ